Kedu ihe kpatara miracast ji apụ? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Miracast nọgidere na-iwepu - otu esi ekpebi
Miracast nọgidere na-iwepu - otu esi ekpebi
Kedu ihe kpatara miracast ji apụ?
Miracastna-eji a Wi-Fi kpọmkwem njikọ maka njikọ na-adịghị eji netwọk rawụta. Naa i nwere ike gbanye rawụta naMiracastkwesịrị ịrụ ọrụ.1 Ọkt 2015
Ndewo onye ọ bụla ma nabata na ọwa YouTube m taa na isiokwu a anyị ga-ahụ ihe ị ga-eme mgbe ekwentị anyị na-akwụsị na WiFi. Mbụ anyị Malitegharịa ekwentị ahụ. Ọ bụrụ na ịmalitegharịrị rawụta ogologo oge, gbanyụọ rawụta.
Chere ihe dị ka sekọnd 10 wee gbanye ya ọzọ. Ugbu a lelee ma ekwentị gị ejikọtara na WiFi kpamkpam. Ihe ọzọ anyị ga - eme bụ ma ọ bụrụ na ị na - eji ụfọdụ ụdị VPN na ngwaọrụ gam akporo gị, gbanyụọ njikọ VPN ma ọ bụ iwepụ ngwa VPN wee hụ ma ekwentị ejikọrọ na Can ma ọ bụ enweghị ike ịmepụta WiFi .
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-aga ntọala ma ebe a ka anyị na-aga njikọ. Anyi ga aga wifi. Mgbe ahụ, ebe a ka anyị pịa akara ngosi atọ a - Advanced na mgbe ị hụrụ na enwere nhọrọ ebe Wi-Fi Power Saving Mode.
Ọ bụrụ na agbanyere ya, gbanyụọ ya. Ugbu a enweta na akụ a ebe a. Gaa Wi-Fi Control History wee pịa nhọrọ a iji mee ka Wi-Fi na-akpaghị aka.
Dị njikere na gbanye Wi-Fi na-akpaghị aka họrọ yana ọnọdụ ọnọdụ ike Wi-Fi agbanyụrụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ka anyị laghachi ma ị ga-ahụ na e nwere ngwa ọzọ ebe a, Smart Gbanye. M na-ahọrọ ngwa a ebe a na mgbe ị hụrụ ngwa ahụ ka ọ na-achịkwa Wi-Fi, a na-enyere ya aka.
N'ihi ya, m kwesịrị ijide n'aka na nhọrọ a nwere nkwarụ. Mgbe nke ahụ gasị, lelee ma ekwentị gị nwere ike ijikọ WiFi kpamkpam. Ọ bụrụ na ịnwere ngwa nchekwa dịka McAfee ma ọ bụ Norton AntiVirus arụnyere, gbanyụọ ha wee hụ ma ị nwere ike ijikọ Wi-Fi nke ọma.
The ikpeazụ nhọrọ maka gị ugbu a bụ Malitegharịa ekwentị gị gam akporo ngwaọrụ na Nchekwa na ọnọdụ na-ahụ ma ọ bụrụ na ekwentị nwere ike jikọọ na Wi-Fi nọgidere na ọ bụrụ na ekwentị nwere ike jikọọ na ọ pụtara na ụfọdụ ngwa na gị gam akporo ngwaọrụ na-akpata nsogbu. Ya mere, ka anyị hụ otú Malitegharịa ekwentị gam akporo ngwaọrụ na Nchekwa na ọnọdụ. Ugbu a, ọ nwere ike ịdị iche na-adabere n'ụdị nke gam akporo ngwaọrụ.
Ana m eji Nkọwa 8. Ya mere ọ bụrụ na achọrọ m ịmalitegharịa Nkọwa 8 na Ọnọdụ Nchedo, m ga-amaliteghachi Nkọwa 8 m na mbụ, pịa bọtịnụ ike. Mgbe m na-ahọrọ Malitegharịa ekwentị na mgbe Malitegharịa ekwentị.
Ugbu a, Ndetu 8 ga-amalitegharịa ma ozugbo e kwuru na 8 amalitegharịrị na mgbe m hụrụ akara ngosi Samsung, m ga-pịa bọtịnụ olu ala. M pịa bọtịnụ olu ala ruo mgbe m hụrụ ọnọdụ nchekwa. Ugbu a, m hapụ bọtịnụ na mgbe m na-ele anya ala ebe a m gam akporo ngwaọrụ malitere na Nchekwa na ọnọdụ.
Ugbu a lelee ma ọ bụrụ na ị nwere ike jikọọ na WiFi na Nchekwa na ọnọdụ ma chere nkeji ole na ole iji hụ ma WiFi ejikọrọ ugbu a maka minit ole na ole. Ọ bụrụ na WiFi nwere ike ijikọ na Ọnọdụ Nchekwa ruo oge ụfọdụ, ọ pụtara na ngwa dị na ngwaọrụ gam akporo gị na-akpata nsogbu ahụ. O di nwute, ugbu a, i nweghi uzo isi mata ngwa nke na - akpata nsogbu.
Nanị nhọrọ dịịrị gị bụ iwepụ ngwa ahụ niile ma wughachi otu otu oge iji hụ ụdị ngwa na-akpata nsogbu ahụ. Olileanya na nke a kwesịrị idozi nsogbu ahụ. Daalụ maka ilere edemede a.
Biko, chọọ ma kekọrịta akụkọ a ma ọ bụrụ na ịchọta na ọ bara uru. Ọzọkwa, pịa bọtịnụ Idenye aha wee pịa akara mgbịrịgba iji nweta ọkwa nke isiokwu ọhụrụ anyị n'efu.
Gini mere ihe ngosi ikuku ji achopu ihe?
Usoro 2: Jiri ntughari ntaneti iji rụnye ngwaọrụ ntanetị. Họrọ bọtịnụ Mmalite, wee họrọ Ntọala> Network & Internet> Ọnọdụ> Ntọgharị netwọk. Na Network nrụpụtaihuenyo, họrọ Tọgharịa ugbu a> Ee iji kwado. Chere maka PC gị ka ịmalitegharịa ma hụ ma nke ahụ na-edozi nsogbu ahụ.Jul 28 2018
Olee otu m ga esi edozi miracast?
Esi edoziugboro ugboroMiracastokwu
Swipe si n'akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ, pịa Ntọala, wee pịa Gbanwee ntọala PC. ...
Kpatụ ma ọ bụ pịa PC na Ngwaọrụ, wee pịa ma ọ bụ pịa Ngwaọrụ.
Kpatụ ma ọ bụ pịa ngosi ikuku, wee pịa ma ọ bụ pịa Wepụ Ngwaọrụ.
Gini mere njikọ m na-akwụpụ?
Ndị a bụ ụfọdụ ndozi enwere ike maka usoro aghara gịNtaneti jikọtarambipụta: Tọgharia gị rawụta, Malitegharịa ekwentị gị ama / kọmputa. ... Melite ndị ọkwọ ụgbọ nyocha WiFi na WiFi rawụta femụwe site na ịlele ndị na-emepụta weebụsaịtị. Kpọtụrụ ISP gị ma hụ ma enwere nsogbu njikọta na mpaghara gị.20 nke 20 2018
Onye ntụgharị: Marta Palacio Onye nyocha: Denise RQI hapụrụ ịntanetị maka otu afọ zuru ezu. Adị m afọ iri abụọ na isii, ọ bụ Mee 1, 2012, m wee pinye plọg ahụ. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ya, mana isi ihe kpatara ya bụ na m dị afọ iri abụọ na isii, m ghọtara ndụ ma jupụta ya.
Ọ bụ obere nsogbu. Ọ dị m nnọọ ka ihe niile ọ karịrị akarị ma enweghị m ike imeri. Camentanetị bịara na-arịwanye elu, enwere ọtụtụ ozi ịntanetị.
I nweghi ike imeri igbe igbe email gi n'ihi na oge itiri 'Archive' na nke ikpeazu, ị ga enweta email ohuru. Nweghị ike imeri na Twitter n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe Justin Bieber kwuru maka ya. Echere m na ọ bụ n'ụzọ dị oke egwu, nke onwe m, na ịntanetị na-emeri ma na-egbochi m.
Ihe niile m ji ebi ndụ bụ ịntanetị. Kemgbe ahụ, enwere m ike ị na-eji Intanet eme ihe ọtụtụ n’ime oge m na-amụ anya. Dị ka afọ iri na ụma, abụ m onye mmebe weebụ.
Amalitere m ide banyere nology dị ka odeakụkọ mgbe m gbara ihe dị ka afọ 20. Nke ahụ bụ ihe m maara n'ezie na amaghị m ihe ndụ dị ka enweghị Internet, na-ejikọtaghị oge niile, na-enweghị igbe ozi e-mail. M na-echeta oge tupu Twitter, ma á »bá» really n'ezie blurry.
M nwekwara ọchịchọ ime ihe ụfọdụ. Achọrọ m ịme ụfọdụ ọmụmụ onwe onye, ​​gụọ ihe, enwere m ụfọdụ ederede ọrụ m na-etinye. Echere m na ọ bụrụ na m kwụsị ịntanetị n'oge m niile, m ga-enwe oge a na-akparaghị ókè iji mezuo ihe m chọrọ ime.
N'ihi ya, m hapụrụ na ịntanetị. Ajuju m juru karia ebum n’uche m bu: Kedu ka intaneti si eji m eme ya na olee otu m si eji ya? Ịntanetị ahụ? Kedu mgbe mkpebi m na ebum n’uche m na-eme na ntanetị, yana mgbe ngwa, ndị mmadụ, usoro na ihe thentanetị dị, onye na-ajụ onwe ya, kedu ka nke ahụ si ekpebi omume m yana otu esi agbanwe? Afọ 90s nke afọ Nicholas Negroponte, onye guzobere Wire d Magazine na MIT Media Lab - dere - webụ dị n'isi mmalite n'oge a - 'Igwe ihe ntanetị na-asọ oyi, anyị enweghị ike ịnagide nke a. Nke ahụ abụghị n'ezie etu esi ebi ndụ.
N'oge na-adịghị anya, a ga-enwe ihe dịka 'bọọ, ha na-aga n'ịntanetị maka gị. Ga-achọta ozi niile. You nwere ike ịghọ okenye toro eto ọzọ.
enwere nsogbu kọmputa
Ma eleghị anya, ụmụaka nwere oge iji sọfụ ịntanetị, ma anyị agaghị. Anyị enweghị ike ịme nke ahụ, anyị bụ ndị otu na-arụ ọrụ n'obodo. 'Ọ mejọrọ kpamkpam.
Internetntanetị bụ maka sọọfụ, nke ahụ bụ ihe anyị na-eme mgbe anyị nọ Ma n'ụzọ ụfọdụ ọ dị mma, ewezuga mmadụ ole na ole a họpụtara - na amaara m na anaghị m etinye ebe a - mgbe m jiri ịntanetị, karịa obere nyocha, Adịghị m arụpụta ọrụ n'ezie. Ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ mmetụta m. Agaghị m enweta ihe - dịka m kwuru na achọrọ m ide, gụọ - enwetaghị m ihe ndị a mgbe m pịrị njikọ mgbe m tweeted mgbe m nọ na Reddit mgbe m na-edekọ nnukwu, ịtụnanya, Oke Osimiri Ozi.
Ọ na-adọpụkarị m uche na ya kama ịmalite ya. Achọghị m ịrụpụta ihe. Ọ bụrụ na e nwere bots ndị a ka ha jiri ịntanetị mee ihe, ekwesighi m iji ya, miche ụzọ m si eji ịntanetị eme ihe na ụzọ ndị mụrụ m si eji ịntanetị eche m na enwere ọdịiche ebe ha nwere ike iji ya karịa ịba uru; ọ bụ ihe bara uru, dị ịtụnanya maka ha.
Ha na-aga na Amazon, ha zụrụ ihe na ha lelee email ha ma ha zitere m email na-ajụ ihe kpatara na anaghị m emelitere ha ozi na nso nso a. Mama m nọ na Twitter ugbu a, papa m nwere Instagram. ma n'ezie, ọ bụ obere akụkụ nke ndụ ha.
Ha mechaa ihe ndị ọzọ a chọrọ ime. Maka m, ma eleghị anya n'ihi na m tolitere ya, ma ọ bụ n'ihi na m bụ onye nzuzu, ma ọ bụ n'ihi na m nwere obere njide njide onwe m, ndụ m abụrụla ịntanetị, ihe ndị ọzọ nwere ike ime n'akụkụ. Elere m ekwentị m anya wee lelie anya ma ọ nwere onye ka nọ ebe ahụ - ọ dị mma.
M ga-eleghachi anya na ekwentị m ma alaghachi m ụwa m, ebe m nọ, ebe m ghọtara, ihe m maara na ebe m nwere ike, chere mmetụta nnwere onwe a dị ịtụnanya. M kwụsịrị ide; Na mgbakwunye na ịntanetị, enwetaghị m ozi ịntanetị ọ bụla. Ndi mmadu anaghi elele email m.
Enweghị m njikọ ọ bụla na ịntanetị. Enwere m onwe m, enwere m obi ụtọ. Ihe jupụtara m ná ndụ.
Ihe niile dị mma karịa, enwere m otu n'ime akwa m, ọ dị mma ...
Mmetụta m nwere bụ nke afọ iri na ise: 'You nweghị ike ịgwa m ihe m ga-eme, ịntanetị. Ndụ m bụ nke m ugbu a, enwere m ike ịme mkpebi. Email a nke na-abata agaghị akpaghasị atụmatụ m maka taa. 'Ọ bụ ihe magburu onwe ya.
Enweela m mmetụta ọhụrụ ndị m na-enwetụbeghị, ma ọ bụ na ọ bụghị ogologo oge. Otu n'ime ha bụ ahuokika. Enweghị atụ, ike gwụrụ.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ị gwụla. Ọ bụụrụ m ihe ọhụrụ. M ga-akọwa mmetụta.
You're naghị eme ihe ọ bụla ugbu a, ị nweghị ihe ị ga-eme, ọ nweghịkwa ihe ọ bụla n’ogologo aka nwere ike idozi ya. Mgbe ị nwere ịntanetị, oge ị na-eche maka ịgwụ ike, ịnwere ike ijide ekwentị gị, swipe ka ị kpọghee ya ma ugbu a ị nwere ụwa zuru oke nke ozi na ntụrụndụ n'ihu anya gị. Ma eleghị anya, nke ahụ abụghị ihe ị chọrọ ugbu a, mana ike agwụghị gị.
Tụkwasị m obi n'ihi na ike gwụrụ m na ọ bụ ihe dị iche iche. Ọ bụ ihe ndị okike na-ekwu kemgbe. Ọ bụ n’oge a ka ụfọdụ na-akpọ ntụgharị uche.
Nweta owu na-ama gị, ị nwere ohere iji chee ma bụrụ ihe okike. Achọpụtakwara m na ọ bụ oge iji kpebie ihe m chọrọ ime kama ịgbada n'ụzọ nke obere nkwụsi ike. Ya mere, mụ na ndị mmadụ na-emekọrịta ihe dịkwa iche iche.
Nke a bụ ihe ọtụtụ mmadụ bịakwuterela, ọtụtụ ihe maka ịkpọkọta anyị na ndị mmadụ, ka ọ bụ naanị anyị na-ezo na kọmpụta anyị ma na-eme ka ọbụbụenyi? Ihe m chọtara bụ na -enweghị ịntanetị, enwere m ike ịnọnyere onye ọzọ karịa ma n'onwe m. 'Nke ahụ siri ike,' 'Ọ bụ nke siri ike soro gị nọrọ.' Ọ na-atụ ụjọ.
Ọbụna na ekwentị, 'wasjọ na-atụ m.' Ikekwe nke ahụ abụghị otuto. Ọ bụghị naanị na enweghị m ekwentị iji dọpụ uche m n'oge a - enweghịkwa m usoro echiche m: 'Ozi ịntanetị m na-agagharị ebe ọ bụla?' 'Enwere m ihe ọ bụla na Twitter?' Echefuru m ịlele ebe a na Foursquare? ' Nke ahụ adọpụghị uche m.
Yabụ enwere m ike karịa n'oge a. Nwanne m nwanyị gwara m na m dị ... n'ụzọ mmetụta uche karịa ka ọ maara m n'ezie na ndụ ya niile.
Enwere m mkparịta ụka mụ na otu enyi m mara kemgbe ọtụtụ afọ bụ - anyị abanyela n'ọkwa miri emi karịa ka anyị nwetagoro. Enwere m ekele na nke ahụ. Mgbe ahụ enwere ihu ọma na ihe abụọ ahụ.
Ike gwụrụ mgbe ị na - eme ya ihe dị mma, mana ọ bụghị ihe dị mma mgbe ị na - egwu egwuregwu edemede. Amalitere m na nke ahụ. Ana m a swearụ iyi na m bụ ...
Ndo, adị m afọ iri abụọ, onye nzuzu, agbaakwala m ọtụtụ egwuregwu ederede n’afọ a. Amaghị m ya na mbụ, anaghị m egwu ọtụtụ egwuregwu edemede tupu ịhapụ ịntanetị. Ọ ghọrọ ihe dị mfe n ’ọ dị naanị ogologo aka.
Anara m onye nchịkwa ahụ wee wepụ mmụọ ahụ na-agbawa obi mgbe ụfọdụ. Egburu m oge dị ukwuu, enweghị m ike ịgwa gị. Ihe ọzọ mere ndị mmadụ bụ mgbe mụ na ha nọ, ọ dị oke mma, nke onwe na nke kpụ ọkụ n'ọnụ.
Mụ na ndị mmadụ kwụsịrị ịna-akpa. E kewapụrụ m n’etiti ndị mụ na ha na-akpa. O siri ike isonyere ndị na-anọghị na steeti - ndị ezinụlọ m niile na mba ahụ - mana ọbụna ndị nọ n'obodo m.
shockwave na-ada ada mgbe niile
Agbaghara m email ahụ, agbaghara m ịkpọ oku Facebook, echefuru m na ihe nkiri a apụọ na ngwụsị izu a. Na-atụ uche ole na ole n'ime ndị a, mgbe ahụ ị na-atụ uche ọtụtụ ndị na-akpọ na ekwentị ihe ha kpọrọ asị. Ha kpọrọ ya asị mgbe m kpọrọ ha.
Ha na-ahọrọ SMS - kachasị ịme atụmatụ - mana m ga-arapara n'ụkpụrụ m. Akpọrọ m ha na ha achọghị ịnọ ọdụ ma ọ bụ na m abịaghị n'oge. Owu nke a na-ewu.
Enwere m nnọọ obi ụtọ. Mgbe ụfọdụ achọghị m ka mụ na ndị mmadụ nọrịa ruo izu. Anaghịzi m emekọrịta ihe n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe m.
Anọghị m na njakịrị ahụ, amaghị m asụsụ ahụ, ahụbeghị m otu ihe nkiri ahụ. Nke ahụ siri ike. Ma m laghachiri na ịntanetị.
Ọ bụ otu n'ime ahụmịhe kachasị egwu n'oge ọ bụla n'ihi na ọ karịrị akarị. Echere m na anyị na-echefu otu anyị si eji ịntanetị eme ihe na oke ụbụrụ ọ ga-ewe iji ya. M ga-azụ onwe m ịzụ afọ a nke na-elele otu echiche n'otu oge ma ọ bụ otu isiokwu egwuregwu n'otu oge, agụrụ m obere akwụkwọ, enwere m ezigbo mmasị; tinye otu nnukwu echiche ahụ na nnukwu akwụkwọ, ma olee otu? mara mma, nke ahụ na-agwa otu onye okwu n'otu oge.
Na mberede, enwere m taabụ ihe nchọgharị iri, ndị mmadụ 20 gwara m nke njikọ m ga-aga n'ihi na atụfuru m ha afọ ahụ m pụọ Mgbasa ozi maka ekwentị m, laptọọpụ, mbadamba. Ọ dị ukwuu. Firstbọchị mbụ m laghachiri, amalitere m ịtụ ụjọ.
N’izu ahụ, ike gwụrụ m. Ihe dị ka otu izu ka e mesịrị, mgbe m laghachiri na ịntanetị, anọ m na cafe m site na email. Enwere m ihe dị ka ozi-e 20,000 na-agụghị mgbe m lọtara.
Echefuru m itinye autoresponder na email m. (Ọchị) Ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ na ịntanetị. Nwanne m nwanyị batara, nwanne m nwanyị, ọ chọrọ ikwu banyere ụbọchị ya.
Enwere m ụdị ige ntị, mana m na-echekwa ihe na-eme na igbe mbata m. Amalitere m ịmeghe laptọọpụ m ntakịrị ma fee ya n'isi n'ihe ọ na-ekwu. Ọ sịrị, 'Ee, mgbidi alọtala.' Ọ ghaghị ịnagide ihe a niile na ndụ ya: ejikọtara m na kọmpụta a, ọ chọrọ ịgwa m okwu na anaghị m adị 100% n'ezie; ma eleghị anya 10%, ma eleghị anya ọbụna 90%, mana enweghị m 100% dị.
Emechiri m laptọọpụ ahụ, achọghị m ịbụ onye ahụ ọzọ. Ma ọ dịkarịa ala, atụfuru m oge ahụ. Mgbe m laghachiri na ịntanetị-- Ma eleghị anya, nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma banyere m e: M na-ede maka mbipụta teknụzụ a na-akpọ 'Verge'.
Enyere m aka ịmalite ha. Ọ malitere ọnwa isii tupu m hapụ ịntanetị. Nke nwere ike ịbụ ntakịrị ihe ịkwa emo.
PowerPoint tags igbe
N'ịgbalị ịlaghachi n'ọrụ, edere m banyere ahụmịhe m maka mbipụta. Enwere m ike ịnweta ọrụ na-ebipụta isiokwu maka ịntanetị na-enweghị ịntanetị. Enyere m ha osisi USB ma ha etinye akụkọ m.
Ma achọrọ m ịmeghachi ego ma m mere ezigbo ọrụ. Amalitere m ịkọ akụkọ na ọnwa mbụ m laghachiri na Google Glass. N'ihi ya, m si na ịntanetị pụọ gaa na ịntanetị na ihu m ruo otu izu n'ikpeazụ nwetaghachiri ụfọdụ arụ ọrụ, na-amụta ịnagide mwakpo a niile na ịntanetị.
Mụ na nwanne m nwoke na nwanne m nwanyị kpọrọ skype oku. Ahụbeghị m ha n'ọhụhụ, ahụbeghịkwa m ụmụaka ebe ọ bụ na ọnwa isii. Achọghị m ime ya.
Amaghị m ihe ọ bụ maka, mana n'ụzọ ụfọdụ ihe ị na-anọghị na ya. Ọ bụ naanị njikọ na-enweghị usoro na ịntanetị na-egbochi m ịkpọtụrụ onye dị m oke mkpa. Ma emere m; Enwetara m ọrụ m ma soro ha.
Nwa nwanne m nwanyị na-akpọ 'Twinkle, ntabi anya, obere kpakpando' na violin maka m, ọ na-amụta igwu violin. Ọ bụ nsụgharị dị nwayọ nwayọ, mana ọ mara mma. Ya na nwa nwanne m nwoke deere abụ nke ha nke ha dere na mpempe akwụkwọ na nzu ma debe ha n'ihu igwefoto ahụ.
Ha bụọrọ m ya. Akpọrọ abụ ha 'Horsnyịnya ,nyịnya', akpọrọ abụ ya 'Helicopter Stop', ihe dị oke ọnụ ahịa. Ọ bụghị naanị na ọ fọrọ nke nta ka m tufuo ihe n’oge ahụ, agbaghara m afọ m dum na-enweghị ịntanetị.
Obiọma bụ ihe dị oke ọnụ ahịa, nnukwu ihe, achọghị m iji nke ahụ egwuri egwu ọzọ. Enwere m obi ụtọ mgbe m laghachiri na ịntanetị. Anọ m na-achọ ịchọta ihe m ga-eme na-esote ma echiche ahụ wee banye n'isi m - ihe m chọrọ ka m chee na mbụ, mana ọ mechara bịakwute m - na enwere m ya.
Ejiri m otu afọ na-agbalị ịchọta ya elekwasị anya na onwe m ma gbalịa idozi ma meziwanye onwe m, bụrụ onye ka mma, gụrụ akwụkwọ, mee ihe dị otú ahụ maka onye ọzọ n'oge ụfọdụ n'afọ na-esote, bụrụ obere ịchọ ọdịmma onwe onye nanị. Na mgbakwunye, ọ naghị arụ ọrụ. Emebeghị m ka m rụpụta nke ọma, agụghị m ma ọ bụ dee ihe niile m chọrọ ime.
N'ihi ya, m mere ihe ọzọ. Ekpebiri m imere ndị mmadụ ihe ma ọ bụ lekọta ndị mmadụ. Nwanne m nwoke na-eje ozi na Air Force, n'ihi ya, m na nwanne m nwanyị na-enyere ụmụaka aka ugbu a na Colorado, ma ọ dị oke mma n'ihi na n'oge ahụ na-enweghị ịntanetị, achọpụtara m na ịhapụ ịntanetị agaghị dozie nsogbu m.
Fọdụ ndị na-ekwukarị okwu m mgbe ọ bụla m bịara hụ ihe m mejọrọ na mgba, “Ebe ọ bụla ị gara, ọ bụ ebe ahụ ka ị nọ.” Enwere m ike ịgbanwe ọnọdụ m, mana m ka bụ nwoke ahụ na-anaghị arụpụta ọrụ. Ma abụm nwoke nke hụrụ ndị mmadụ n'anya nke ukwuu, ahụrụ m ụmụ nwanne m na ụmụ nwanne m n'anya.
Nke ahụ bụ nwanne ọzọ. ”Enwere m ụmụnne nwoke abụọ, ụmụ nwanne na ụmụ nwanne; dị mgbagwoju anya. Enwere m ike iwepụta oge iji soro ụmụaka a nọkọọ ma ọ bụ oge bara uru bara uru.
Emechara m nwee ike ịkọwa ihe m hụrụ dị mkpa na ịntanetị. Ọ dị mma ịnwe ikike na ya, ọzọ enwere m nnwere onwe ahụ enwere m mmetụta mgbe m hapụrụ ịntanetị. “You're bụghị onye isi m.” Ee, m na-amị mkpụrụ ma na-adọpụ uche ngwa ngwa.
Ma ọ bụghị ịntanetị kpatara kpatara ndụ m. Ekpebiri m na achọrọ m isoro ụmụaka ndị a nọtụ obere oge nna ha na-anọghị. Nke ahụ na-akwụghachi ụgwọ.
Nwa nwanne m nwoke nwere ụfọdụ ihe egwuregwu Star Wars ọ maghịkwa ihe Star Wars bụ. Ya mere, ọ na-akọwa ọrụ nke ọkụ ọkụ na m. Ọ na-ekwu, 'Onye ọkụ na-agbapụ na asọmpi ahụ, a na-agbakwa asọmpi ahụ.' Ọtụtụ mmejọ na ahịrịokwu ahụ.
Ọkụ ọkụ abụghị ihe agha. M tweeted ya, n'ezie. Somebody tweeted to me, enyi m, ọ bụ onye Juu Ọtọdọks, na m na-agwa ya okwu ọtụtụ mgbe ọ bụghị na ịntanetị.
Ọ maara otu esi achọta nguzozi ahụ. Ọ bụ onye nyocha teknụzụ, mana ọ na-asọpụrụ ụbọchị izu ike ma soro ezinụlọ ya nọrọ taa. O kwuru, sị, 'Ọ bụrụ na ị ka nọ 100% n'ịntanetị, ị gaara agabiga ahụmịhe a, ma ọ bụrụ na i mee Ọ bụrụ na ị ka nọ 100% na-anọghị n'ịntanetị, anyị agaraghị ahapụ ya. 'Ee enwere m.
Achọpụtala m nguzozi. Emere m ihe na ndụ n'ezie, agwara m ịntanetị banyere ya. Obi dị m ezigbo ụtọ n'ihi na achọrọ m ijide n'aka na anyị na-eche ihe bụ mkpa anyị na nke anyị na-eme yana ịntanetị agaghị ekwe ka anyị gwa anyị n'ụzọ ọzọ, daalụ. (Ịkụ aka)
Nwere nsogbu na Miracast njikọ na TV-disconnection?
M jikọọ na igwe onyonyo m site na miracast, ha wee jikọọ nke ọma, mana mgbe nkeji ole na ole (1, 4, 10 nkeji) ọ ga-apụ apụ na miracast na akpaghị aka. M na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala niile (netwọk, ikuku, chipset, Bluetooth, intel graphic) mana ọ bụghị nke ọma. Ọ nwere nsogbu na Windows ma ọ bụ?
You nwere ike iji Miracast iji jikọọ WiFi?
Miracast bụ naanị protocol, ị ka chọrọ njikọ na ngwaọrụ, nke bụ nsogbu ọ na - enwe. Keith, gbalịa gbanyụọ wireless wee laghachi ọzọ, wee họrọ ScreenBeam na njikọ wifi gị. Ndi post a nyere aka? Daalụ maka nzaghachi gị!
You chọrọ onye ọkwọ ụgbọ ala Miracast maka Roku?
A ihuenyo-mirroring njikọ Roku chọrọ a na-arụ ọrụ Miracast ọkwọ ụgbọala. Ọ dabara nke ọma, akụrụngwa WU (Windows Update) na-enye ma na-echekwa ndị ọkwọ ụgbọala a na ụdị Windows niile (Windows 7, Windows 8.1, na Windows 10) niile.
Enwere ihe nkedo Mira maka kaadị ikuku?
A na-akpọkarị Mira-cast n'akụkụ kaadị ikuku, dịka e kwuru n'isiokwu a maka ngwaọrụ ọzọ. Echere m na nke ahụ na-enyere aka! Kpachara anya maka ndị scammers na-ezipụ nọmba ekwentị akwadoro na / ma ọ bụ adreesị ozi-e na obodo.